सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको घोषणा : फैसला कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी | गृहपृष्ठ
Home समाचार सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको घोषणा : फैसला कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
on: July 31, 2018 समाचार
सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको घोषणा : फैसला कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
फैसला कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको काम जटिल बन्दै गएको अवस्थामा पीडित सर्वसाधारणले भने सर्वाेच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले गत असार १२ गते सडक विस्तारका विषयमा जारी गरेको पूर्णपाठको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै सम्बन्धित निकायले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तारको कामलाई लिएर पीडित पक्षहरूले २०७४ भदौमा सर्वाेच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुरूपको कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर, वासस्थानको अधिकार हनन नहुने गरी, बालबालिकाको पठनपाठनमा हानि नपुग्ने, कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेरमात्रै सडक विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाउनेलगायत व्यवस्था गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने घोषणा गरेको हो । समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले साउन १४ गतेदेखि २८ गतेसम्म शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यकाका २८ ओटै नगरपालिका, पुरातŒव विभाग, गुठी संस्थानमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र कार्यान्वयन नभए दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए । कार्यक्रममा सहभागीले विस्तृत अध्ययन गरी सडक विस्तारको काम र नयाँ मापदण्ड बनाउन माग गरे ।
प्रक्रिया पुर्‍याए सडक विस्तारमा समस्या छैन
सुमन सायमी, अध्यक्ष
काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समिति
सडक विस्तारमा देखिएको समस्या भनेको सरकारले उल्टो प्रक्रिया अपनाउनु हो । सम्बन्धित सरकारी निकायले सडक सीमा तोक्नुअघि जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । सडक विस्तार गर्नुपूर्व अपनाउनुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिइएन । उपत्यकावासीको निजी सम्पत्ति सरकारले आफ्नोजस्तो गरी टेण्डर ग¥यो । यसले गर्दा सडक विस्तारमा शुरूदेखि नै समस्या आएको हो । हामी विकासविरोधी होइनौं, तर प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ ।
उपत्यकामा बढ्दै गएको आप्रवासनको अवस्था पहिला अध्ययन हुनुपर्छ । बस्ती विकास तथा सडक विस्तारका लागि अहिलेको उपत्यकाको क्षमता कति छ ? भन्ने विषयमा यकिन गरिनुपर्छ । उपत्यकाको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गरेन भने उसैका लागि घातक साबित हुन्छ । विकास सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ, तर केन्द्रीकृत विकासले मात्रै समृद्धि आउँदैन । अहिले विकास केन्द्रीकृत भएको छ, यसलाई विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । सरकारको विकास नीतिले जनता विस्थापित हुनु भएन । मुआब्जा नदिई र विस्थापितलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरिदिँदा समस्या आएको हो । सरकारले विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो दिएको छैन ।
सडक विस्तारलाई जटिल मात्रै बनाइएको हो
विमल श्रेष्ठ, सदस्य, सल्लाहकार समिति
काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि कुनै कोणबाट पनि जटिलता छैन । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ यी कानूनी दस्तावेज छन् । विकासे आयोजनाहरू निर्माण गर्न रोकिएको छैन । तर, आयोजनाबाट प्रभावित हुने लक्षित वर्गलाई कसरी पुनःस्थापना गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति कसरी मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा कानूनमै स्पष्ट गरिएको छ । त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याए कुनै जटिलता हुँदैन ।
अहिले सरकारले सडक विस्तार गर्दा अपनाएको पद्धति नै गलत छ, यो विषय सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले पुष्टि गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ३ ले कुनै पनि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सडकलगायत आयोजनाका लागि जग्गा आवश्यक भएमा अधिग्रहण गरी प्राप्त गर्ने भनिएको छ । तर, सम्बन्धित निकायले अनुसरण गरेनन् । सडक विस्तारमा सार्वजनिक सडक ऐनको दफा ३ र ४ ले सडक निर्माण, सुधार तथा विस्तार गर्दा आवश्यक अधिग्रहण तथा मुआब्जा दिएर गर्न भनिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरिएन । अहिले मुआब्जा नदिईकन घर/जग्गाहरू भत्काइएको छ । कानूनअनुसार गरिएमा जनताले स्वयम् जग्गा खाली गर्न तयार हुन्छन् ।